काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या १९ पुगेसँगै विभिन्न स्थान सिल | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या १९ पुगेसँगै विभिन्न स्थान सिल
access_time२०७७ साल जेष्ठ ८ गते, बिहीबार ०५:५८ AM chat_bubble_outline Comments folder_open प्रदेश ३ पत्रपत्रिका
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमितको संख्या १९ जना पुगेसँगै विभिन्न स्थान सिल गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र जवानमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बुधबार १९ पुगेको हो ।
अहिले त्यस क्षेत्र सिल गरिएको छ । त्यस्तै, मैतिदेवी बस्दैआएका जुम्ल्याहा दाजुभाइमध्ये एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सो क्षेत्र पनि सिल गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार, कालिमाटी वृत्त परिसरमा रहेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र महिला सेलको कार्यालय पनि सिल गरिएका छन् ।
परिसर प्रमुख श्याम ज्ञवालीले प्रहरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कताका लागि कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा आवतजावत समेत रोक लगाइएको बताए । मैतिदेवीमा पनि केही दिनका लागि आवतजावतमा रोक लगाइएको छ ।
कालिमाटी प्रहरी वृत्तको क्षेत्रमा आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि जनसेवा, स्वयम्भू र कीर्तिपुरबाट थप सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको छ । बिहीबारसम्ममा आरटी–पिसिआर परीक्षण हुन्छ होला त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ ।
उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या १९ पुगेको छ । बन्दाबन्दीको बिचमा पनि तराईका विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकामा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको दावी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका अनुसार, काठमाडौंमा १२, भक्तपुरमा पाँच र ललितपुरमा दुईजना कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छन् । काठमाडौँमा फेला परेकामध्ये चारजना उपचारपछि निको भएर यसअघि नै घर फर्किएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक डा‍‍. प्रवीन नेपालका अनुसार, उपचारार्थ भर्ना भएका १४ जनामध्ये तीन महिला र एक बालक रहेका छन् । तीमध्ये पाँचजना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
सङ्क्रमित सबैको अवस्था सामान्य रहेको डा. नेपालले बताए । ‘कोरोना भाइरसको जटिल लक्षण कसैमा देखिएको छैन, नियमित योग र व्यायाम गराउने कार्य भइरहेको छ, उनले भने, ‘सङ्क्रमित सबैको अवस्था सामान्य छ ।’ उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।